Tummers: Avy amin'ny orinasa kely fikojakojana mankany amin'ny mpitarika manerantany - Gazety Potato System
в Success Story, vaovao
Niorina tamin'ny 1976 tany Holandy, ny fahombiazan'ny Tummers Food Processing Solutions dia mifototra amin'ny serivisy mpanjifa. Nandritra ny 40 taona mahery dia nanambatra ny teknolojia farany izahay mba hamoronana vahaolana fanodinana ovy mahomby sy azo antoka. Ny orinasa injeniera holandey amin'izao fotoana izao dia manolotra milina tokana sy tsipika fanodinana feno ho an'ny mpanamboatra sakafo manerana izao tontolo izao.
Ny orinasam-pianakaviana Tummers dia nanomboka niasa tamin'ny 1976 ho orinasa injeniera sy mpiara-miombon'antoka amin'ny fikojakojana fitaovana ho an'ny indostrian'ny ovy miroborobo ao amin'ny faritanin'i Zeeland holandey. Nanomboka teo, ny orinasa dia lasa mpamorona malaza sy mpanamboatra milina tokana sy tsipika famokarana feno, ary koa mpamatsy serivisy mifandraika amin'ny indostrian'ny fanodinana ovy iraisam-pirenena.
Ny fitakian'ny indostria momba ny fahombiazana, ny faharetana ary ny famokarana dia midika fa mifantoka tanteraka amin'ny fanavaozana ny Tummers. Nandritra ny taona maro dia nahazo fahalalana betsaka momba ny ovy ho akora fototra izahay ary nahazo traikefa be dia be tamin'ny famoronana dingana fanodinana mahomby. Izany dia hita mazava tsara ao amin'ny isan-karazany ny fitaovana, izay tsy afaka mahita vahaolana ho an'ny fanasana, fanadiovana, fanapahana sy fanamainana. Miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro amin'ny fanodinana ovy, Tummers no mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny famokarana tsipika feno ho an'ny frezy french sy flakes ovy.
Ny Tummers Food Processing Solutions dia nanao ny fanamainana amponga voalohany tamin'ny taona 1982 tamin'ny fampiasana ny fahalalany momba ny teknolojia sy ny fitaovana fanodinana sakafo. Tamin'ny taona 2003, nahazo an'i Simon Dryers i Tummers, mpanamboatra fitaovana fanamainana any UK. Ny fahalalana izay nangonin'ny mpanorina an'ity orinasa Richard Simon ity nandritra ny taona maro dia namela ny Tummers Food Processing Solutions ho lasa manam-pahaizana manokana kokoa amin'ny famolavolana sy fanamboarana fitaovana amin'ny famokarana flakes ovy. Amin'ny fandalinana tsy tapaka ny filan'ny mpanodina ovy sy ny fampiharana ny fanavaozana farany, i Tummers dia lasa mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny fanamboarana fitaovana ho an'ny famokarana flakes ovy avo lenta.
Ny Tummers Food Processing Solutions dia niditra voalohany tao amin'ny tsena Rosiana tamin'ny taona 90, rehefa nahavita ny baiko voalohany ho an'ny fanavaozana ny fitaovan'ny mpanjifa Rosiana. Tao anatin'ireo taona nanaraka, nanohy nandinika ny tsena Rosiana ny orinasa injeniera holandey mandra-panokafana ny birao fivarotana Rosiana tamin'ny taona 2008. LLC "Tummers Methods" dia manafaingana ny fifandraisana eo amin'ny Tummers sy ny mpanjifa Rosiana, ary manome fahatakarana lalindalina kokoa ny tsenan'i Eoropa Atsinanana.
Ny taranaka vaovao fanamainana amponga
Tamin'io taona io ihany, rehefa nosokafana ny biraon'ny varotra any Rosia, ny Tummers dia nanolotra an'i Rosia ny tsipika feno voalohany ho an'ny famokarana flakes ovy manana tanjaka 550 kg / h miaraka amin'ny fanamainana amponga iray 2 × 5,20 m. Nanomboka teo, ny isan-karazany Ny fanamainana Tummers dia nitombo be, ary manolotra fanamainana amponga amin'ny tanjaka samihafa izahay. Tamin'ny taon-dasa dia novolavolaina ny fanamainana amponga miaraka amin'ny fanamainana lehibe indrindra hatrizay. Ity milina lehibe ity, mirefy 8 x 2 m eo ho eo, dia naorina miaraka amin'ireo fivoarana sy fanatsarana farany rehetra ary ahafahan'ny mpamokatra flake hampitombo be ny fahombiazan'ny orinasany.
Fanitarana ny famokarana
Ho fanampin'ny famolavolana fanamainana rotary manara-penitra, Tummers Food Processing Solutions dia nanomboka tetikasa fanitarana feno fatra-paniry laza tamin'ny taon-dasa izay hanampy ny orinasa hiantoka ny hoavy maharitra ary amin'izany dia hanompo bebe kokoa ny mpanjifany. Ny tetikasa iray manontolo dia antenaina haharitra 1 ka hatramin'ny 2 taona, miaraka amin'ny Tummers mandray ny olana maharitra. Hamboarina, ohatra, ny tobin-dranon’orana 50 000 litatra hitsapana ny fiaran’izy ireo, ary ny trano mihitsy no hapetraka amin’ny rafitra fanaraha-maso ny toetr’andro maharitra.
Nanan-kery tamin'ny Janoary ny lalàna vaovao momba ny fiarovana ny mpiasa amin'ny fambolena
Ny mpivarotra fitaovana fanodinam-bolo dia bankrupts izay mpamokatra ovy be mpitia any amin'ny faritra